Gasthof-Metzgerei Altmann (Eschlkam), suite kunye WiFi
Amagumbi ethu anefenitshala etofotofo onke axhotyiswe ngeshawa / indlu yangasese, iTV, isixhobo sokomisa iinwele kunye neWiFi. Ii-suites zethu zinendawo yokuhlala eyongezelelweyo yokufumana indawo yokuphumla.
Isizukulwana sesine sentsapho eqhutywa yiGasthof Altmann ibekwe eWarzenried kufutshane neFurth ehlathini, ijikelezwe ngamadlelo kunye namasimi. Inendawo yokutyela enezihlalo ezingama-60 kunye nethafa kwakunye nesauna. Ukongeza, kukho ibhula apha endlwini, evelisa iimveliso zesoseji kwindawo yokutyela nakwivenkile ethengisa inyama. Igadi ikumema ukuba uphumle kunye neendawo zokulala ezahlukeneyo kunye neendawo zokuhlala. Kukho iindawo zohambo ezahlukeneyo kwindawo ekufutshane, njengeGlasdorf e-Arnbruck, iWaldwipfelweg eSankt Englmar, indawo yokuhlambela eshushu e-Bad Kötzting kunye namathuba okudlala. Iindlela ezahlukeneyo zebhayisekile kunye neendlela zokuhamba zikwindawo ekufutshane. Sijonge ukukwamkela kungekudala. Iqela lakho elisuka kuGasthof Altmann
Kuninzi ekufuneka uyenzile kwaye ufumanise kwindawo ejikeleze iWarzenried. Iinketho ezahlukeneyo ezinjengokuqubha kwiibhafu ezishushu ze-Bad Kötzting okanye indawo yokuqubha yendalo ekufuphi e-Neukirchen kufutshane neGazi eliNgcwele, ukuloba, ukubhola, ukukhwela ihashe, ukukhwela iphenyane kunye nokunye okuninzi ukwenza iholide yakho ibe yesebenzayo. Kananjalo akukho kunqongophala kweendlela zokuhamba intaba apha. Jonga indawo entle ngeenyawo kwaye uvumele ingqondo yakho ibhadule. Indawo ethandwa kakhulu yidrama yakudala yaseJamani, i`Drachenstich` kufutshane neFurth im Wald.